आज भदौ ५ गते शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल - Rajmarga
आज भदौ ५ गते शुक्रबार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् राशिफल
आज २०७७ भदौ ५ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ ।
सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ?
Previous post: पछिल्लो २४ घण्टामा उपत्यकामा २०० जनामा कोरोना पुष्टि
Next post: घरैमा बसेर तीज मनाउन उपराष्ट्रपतिको आग्रह